Ihe ngosi agro -ulo oru mba ofesi "AGROVOLGA 2021" agwụla - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Ngosipụta nke agro-ụlọ ọrụ mba ụwa "AGROVOLGA 2021" agwụla
Site na Julaị 1 ruo Julaị 3, 2021, emere ihe ngosi agro-industrial International "AGROVOLGA 2021" na Kazan Expo IEC na mpaghara JSC RATSIN dị n'akụkụ ya.
Onye isi ala nke Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov mepere ihe ngosi ahụ: "AGROVOLGA" bụ ihe omume dị oke mkpa na ọkwa gọọmentị, ọ bụ usoro mmụta, ihe ọhụrụ na asọmpi nwere nnukwu ihe ngosi. Nke a bụ ọrụ na -aga nke ọma. " Onye osote onye isi ala nke Republic of Tatarstan - Minister of Agriculture and Food of the Republic of Tatarstan Marat Zyabbarov kwukwara okwu dị nsọ: “N'usoro ọhụrụ, na saịtị ọhụrụ, anyị kpebiri ime nnukwu emume" AGROVOLGA " . Anyị na -atụ anya na ọ ga -aba uru ma dị irè maka mmadụ niile - ọtụtụ ihe ọhụrụ na ihe na -atọ ụtọ: igwe, akụrụngwa, ụdị ihe ọkụkụ anyị dị iche iche. " Onye isi ngalaba na -emepụta mkpụrụ, mechanization na chemicalization nke nchekwa osisi nke Ministry of Agriculture nke Russia Roman Nekrasov, n'aha Mịnịsta ọrụ ugbo nke Russia Dmitry Patrushev, kelere ndị sonyere na mmemme a: “Taa, AGROVOLGA dị ka ihe ngosi ugbo kachasị ukwuu n'ụwa n'ihe banyere ogo ya, ọkwa nke saturation nke mmemme azụmahịa ya. Ọ bụghị mpaghara ọ bụla na-elebara ogige agro-industrial dị otú ahụ anya ma na-etinye usoro agbakwunyere n'ịhazi ụdịrị ihe a. "
Ndị otu 379 sitere na mpaghara 35 nke Russian Federation bịara ngosi ahụ, ndị ọkachamara 11 na ndị isi ụlọ ọrụ agro-industrial sitere na mpaghara 217 nke Russia na mba 64 nke ụwa (Italy, Egypt, Turkey, Kazakhstan) ghọrọ ndị ọbịa.
Ekewara ihe ngosi ahụ buru ibu na ngọngọ dịka ntuziaka isi nke ogige ụlọ ọrụ ugbo. Ụfọdụ ebe ndọba ụgbọala ndị ahụ dị na ụlọ ngosi ihe ngosi nwere mpaghara 10 m000.
N'ebe saịtị korota mepere emepe, ihe karịrị ndị nrụpụta 60 na ndị na -ebubata ihe gosipụtara igwe ọrụ ugbo ha.
Ngosipụta nke onye mmebe ihe ngosi - JSC ROSAGROLEASING - nwere mpaghara 5 m000, na mpaghara a bụ akụrụngwa JSC Eurotechnika, LLC Tekhnika Zemli, LLC TIMER -T, JSC Tatagroleasing, DAIMLER KAMAZ RUS ”na ndị ọzọ.
Banyere 20 puku sq. M. ekenyela ihe ngosipụta nke igwe ọrụ ugbo.
N'ihi na oge mbụ na ngosi, Kazan GAU gosiri ya authoring mmepe - a n'ụzọ zuru ezu kwurula unmanned traktọ nke 4th larịị ADAS. Drone nwere ike rụọ ọrụ ịkọ ala, zere ihe mgbochi n'ụzọ ya wee rụọ ọrụ na -enweghị nkwukọrịta satịlaịtị na ekwentị.
N'ime usoro ihe ngosi ahụ, na nke mbụ, a na-eme asọmpi mpaghara ụbọchị abụọ "Ihe ngosi traktọ" n'okpuru nkwado nke JSC "ROSAGROLEASING", nke ndị na-arụ ọrụ igwe sitere na mpaghara iri atọ na atọ nke Republic of Tatarstan lụrụ ọgụ maka aha onye ọkwọ ụgbọ ala kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọala traktọ nwere ahụmịhe afọ 33 sitere na mpaghara Yutazinsky (LLC "Unysh") Ildar Galeev.
Ụlọ ọrụ iri atọ gosipụtara ihe ndị ha rụzuru na ngalaba ozuzu, fatịlaịza ọhụrụ na ngwaahịa nchekwa ihe ọkụkụ n'ubi ụgbọelu. Maka oge izizi n'ụdị a, ọtụtụ ụlọ ọrụ sonyere na mpaghara anyị, gụnyere Ammoniy JSC (onye na -akwado ngalaba mmepụta mkpụrụ), TDURALCHEM»,
EkoNiva-Semena LLC, SAATBAU RUS LLC, MICROBOX LLC na ndị ọzọ. N'ebe saịtị ahụ, mmadụ nwere ike ịhụ ụdị ọhụrụ a na -akụbeghị na Republic of Tatarstan.
Ndị nhazi ahụ kwadebere mmemme azụmaahịa dị elu nke gụnyere ihe karịrị ngalaba 32 ụlọ ọrụ na tebụl okirikiri na ntinye aka karịa ndị ọkachamara Russia na mba 170. Isi ihe omume a bụ ogbako sayensi na nke bara uru n'isiokwu bụ "Ihe ịma aka zuru ụwa ọnụ maka nchekwa nri: ihe egwu na ohere."
N'oge ngosi nke ọgbakọ, a tụlere okwu nchekwa nchekwa nri na ọkwa ụwa na mpaghara, atụmatụ FAO iji merie agụụ na ịnweta nri dị mma, ihe egwu ihu igwe na ike nke ọrụ carbon, a tụlere isiokwu gbasara gburugburu ebe obibi na ọrụ ugbo. . E kwukwara okwu banyere mkpa ọ dị ịbịanye aka na mmepe sayensị, ọkachasị n'ihe gbasara COVID-19, echiche nke imepụta ndị ntorobịa agro-teknụzụ ndị ntorobịa ka eburu ụzọ, mmepe sayensị sayensị. tụlere, gụnyere dabere na mahadum, ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ nyocha.
Dị ka akụkụ nke ihe omume azụmahịa nke ihe ngosi ahụ, ndị ọkachamara na ndị na -eme ihe kwuru banyere ọnọdụ dị ugbu a na isi ihe mmepe na ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ, gụnyere ohere ndị na -emepe na nloghachi nke ụlọ ọrụ. Enyere nlebara anya pụrụ iche maka mkpa ịtụle na ịbawanye ike mkpụrụ ndụ ihe nketa, ngwaahịa na mmemme teknụzụ ọhụrụ maka inye nri, ịzụ anụmanụ, ọrụ ọgwụ anụmanụ, teknụzụ na ahịrị fatịlaịza ọgbara ọhụrụ maka imepụta ihe ọkụkụ, akụrụngwa teknụzụ maka mpaghara ọrụ ugbo niile. A kọwakwara okwu gbasara ịrụ ọrụ ugbo na ụzọ isi meziwanye ya. A tụlere amụma mmepe, ụzọ nyocha na atụmatụ maka imejupụta ọnọdụ uto maka ụlọ ọrụ mmiri ara ehi na nzukọ izu ụka atọ nke Ọkachamara Council nke Dairy Market Research Center (DIA), nke emere na mba ahụ na nke mbụ.
JSC "Rosagroleasing" nwere nnọkọ buru ibu na mmezi teknụzụ nke agro-industrial complex nke ndị nnọchi anya Ministry of Agriculture nke Republic of Tatarstan na ndị na-eweta ya.
Onye nkwado ihe ngosi ahụ, JSC Firm "August", kesara ahụmịhe ya nke iji No-Till na Tatarstan n'ụdị tebụl okirikiri; "na wdg.
N'ime ụbọchị ngosi ahụ, a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ise dị mkpa: nkwekọrịta n'etiti Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Tatarstan na United Grain Company JSC maka ndụmọdụ na imekọ ihe ọnụ; nkwekọrịta n'etiti Rosagroleasing JSC na AVTODOR LLC-MOTORS ", n'etiti JSC" Rosagroleasing "na LLC" Kuhn Vostok "na mmekorita bara uru nke na -achọ ịbawanye ahịa; Nkwekọrịta n'etiti Rosagroleasing JSC na TPK MTZ-Tatarstan LLC na ntinye akụrụngwa n'okpuru mmemme ịgbazinye ego maka afọ 8; Nkwekọrịta nke Mịnịstrị na -ahụ maka ọrụ ugbo nke Republic of Tatarstan na PhosAgro PJSC, nke na -enye maka imepụta ebe nkesa nkesa fatịlaịza nke abụọ na Tatarstan.
AgroFoodFest gastronomic food food dị n'akụkụ ọdọ mmiri mgbapụta juru ndị sonyere na ndị ọbịa anya. N'ụlọ nri, mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nri dị iche iche esiri n'elu ọkụ mepere emepe sitere na ngwaahịa Tatarstan eke.
N'ịchịkọta nsonaazụ ihe ngosi a, anyị nwere ike iji obi ike kwuo na "AGROVOLGA 2021" abụrụla ọmarịcha ikpo okwu maka igosipụta ngwaahịa na teknụzụ nke ya, maka ịmara ihe ndị rụzuru ọhụrụ na ngalaba dị iche iche nke ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe, maka inweta. ozi zuru oke gbasara teknụzụ agro-teknụzụ na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, ọnọdụ zuru ụwa ọnụ na ogige agro-industrial, yana nyekwara ohere ịnweta kọntaktị azụmahịa ọhụrụ na iwusi ndị dị adị ike.
Hụ gị na Ihe ngosi Agroindustrial International "AGROVOLGA 2022"!
Tags: "AGROVOLGA"Republic nke Tatarstan
Ubochi nke uzo nduku na LLC "Agrofirma" Slava Potato "
Ụbọchị Ubi nduku na Agrofirma Slava Poteto